Ny ankamaroan'ny firenena mitsidika an'i Azia, fantatrao daholo ve? | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Toerana fitsangatsanganana, Fitsangatsanganana any Azia
Nisy fotoana nanan-tarehy lamaody eropeana, miresaka fizahantany, satria ny ady mangatsiaka dia nampisaraka azy ary nahagaga ny fifanoherana. Androany aho mieritreritra Azon'i Azia i Eropa raha mieritreritra toerana lavitra sy hafakely sy kolontsaina tena hafa isika.
Ny hafa, mpandeha, tianay. Maninona no manandrana ireo tsiro mitovy, mahita ireo tarehy mitovy, mihaino ireo fiteny efa fantatsika? Hafa mihitsy i Asia ary izany no antony manintona be azy. Saingy misy firenena malaza kokoa noho ny hafa raha ny fizahantany no resahina ary eto dia ireo firenena aziatika be mpitsidika indrindra tato ho ato:
5 Korea Atsimo
Tsy isalasalana fa i Shina amin'izao fotoana izao Io no goavan'ny fizahan-tany aziatika. Nisokatra ho an'izao tontolo izao amin'ny lafiny toekarena izy ary ny fanovana lalina nataony dia mahasarika antsika ary hahatonga ny sasantsasany amin'ireo toerana fizahan-tany ho sariaka kokoa ho an'ireo mpandeha izay tsy mahalala teny sinoa iray akory.
Tombanana fa isan-taona Sina mandray mpitsidika vahiny efa ho 58 tapitrisa, raha tsy manisa ny tanànan'ny Hong Kong sy Macao izay miaraka mandray manodidina ny 30 tapitrisa isan-taona. Ny azo antoka dia ny isan'ny mpandeha mankany amin'ny tanibe Shina sy ireo toerana tsy dia fantatra loatra dia mitombo.
Ny varavarana eo aloha matetika Beijing io no foiben'ny firenena nandritra ny taonjato maro. ny Tanàna voarara, la Kianja Tiananmen, ny Mausolika Mao, ny Hutongs na ny tanàna manodidina izay mitahiry an'i Beijing taloha, ny tranombakoka ary ny lapa sy ny tempoly hafa. Ary tsy lazaina intsony ny lehibe tsena izay misy fiantsenana tsara sy amin'ny vidiny tsy mampino.
Shanghai dia tanàna maoderina, mavitrika. Nisy foana. Làlana Nanjing Io no lalana handehanana sy hiantsenana, fa ny faritra manodidina mahafinaritra ny maso sy ny lanilany ireny. Raha vantany vao nipetraka teto ny frantsay sy anglisy dia nijanona ny tranony sy ny dian-kolontsain'izy ireo. Tsara koa ny fiainana amin'ny alina, na dia tsy tanàna mora vidy aza.
Hong Kong ohatra iray hafa amin'ny tanàna cosmopolitan izy io. Ala an'ny tranobe, escalators na aiza na aiza, bara sy trano fisakafoanana mahafinaritra, tsena handany andro miserana sy mitaingina sambo hankafy ny jiron'ireo trano isan-kariva.
Misy fitsangatsanganana any amin'ireo nosy akaiky miaraka amin'ny tempolin'izy ireo sy tanàna mahafinaritra ary adiny iray dia Las Vegas any Atsinanana, Macao, zanatany Portiogey teo aloha.
Fa i China koa dia manana Terracotta Warriors ao Xian, ny tempoly sy ny tontolon'ny lanitra Tibet, ny tontolon'ny Guilin ary fitsangantsanganana an-dranomasina Li sy ny Yangtze miaraka aminy Tohodrano telo Gorges, ohatra. Toeran-kaleha arivo ao amin'ny iray, i Chine io ary manome ny laharana voalohany azy.
Get mpitsidika efa ho 25 tapitrisa isan-taona ary ny ankamaroany miditra amin'ny firenena amin'ny alàlan'ny Kuala Lumpur, ny tanànan'i Petronas, ireo tilikambo kambana. Ankoatra ny tanàna maoderina, misy ivon-toeram-pivarotana, bara, kafe ary trano fisakafoanana mihaja, manome bebe kokoa antsika io.
Afaka manao izany isika any amin'ireo nosin'i Malezia fialan-tsasatra, antsitrika, snorkeling, fitsangantsanganana, jono ary filentehan'ny masoandro amin'ny toerana paradisa. Ary ny morontsiraky ny saikinosy Malay, Langkawi na Tioman, tsy lazaina intsony.
Ho an'ny backpacker, Thailand dia tsara satria na dia lafo aza ny rivotra any ny vidim-piainana dia tena mora vidy. Ireo nosy sy ny morontsiraka tropikaly Tsara izy ireo, toa tsy tapitra ny fahavaratra eto, fa ny renivohitra Bangkok kosa dia toeran-kafa mahafinaritra.
Raha ny marina, Bangkok no tanàna be mpitsidika indrindra eto an-tany ary isan-taona dia mpitsidika 16 tapitrisa no manitsaka azy. Manao ahoana izy ao? Ny hatsarana sy ny vidiny ambany dia mitovy amin'ny fahombiazan'ny fizahan-tany.
Raha mahita sari-tany ianao dia takatrao fa i Singapore dia eo amin'ny faritr'i Malezia sy Indonezia ka araraoty ary mahazoa mpitsidika. Kajy izay isan-taona dia olona 10 tapitrisa mahery no mitsidika azy io.
Betsaka ny mankany amin'ny azy trano filokanaMisy trano filokana roa goavambe malaza eran'izao tontolo izao: Resorts World Sentosa, misy hotely, ary Marina Bay Sands. Ny foronina maoderina sy saika siansa Zaridaina eo akaikin'ny Bay Magnet mpizahatany tsy azo lavina izy ireo.
Ity firenena kely ity, izay voamariky ny fizarazarana mbola mitohy, dia napetraka teo imason'ny fizahantany hatramin'ny nahombiazan'ny Famokarana sinema sy fahitalavitra Koreana. ny K-fampisehoana tantara Nanjary nalaza be tany Asia izy ireo aloha ary lanin'ny Eropa sy Amerika izao.
Noho izany, Seoul, renivohitra, izay toerana mahazatra indrindra amin'ireo famokarana audiovisual rehetra ireo, no toerana itodiana any Korea. Izy io dia tanàna maoderina sy tsara tarehy izay nahavita nihanika ny isan'ny mpitsidika ny firenena hatramin'ny olona 10 tapitrisa isan-taona.
Mazava ho azy, Korea Selatan dia firenena tena tsara tarehy nefa mbola ambanivohitra be ihany ka afa-tsy i Seoul sy ny tanàna lavitra indrindra an'i Busan tsy misy ivon-tanàna lehibe hafa hita. ny Nosy Jeju Ny fiatrehanao an'i Seoul dia asaina ary raha tianao ny natiora, ny toerana farihy, ny bay ary ny morontsiraka Koreana dia tanjona tsara.
I Indonezia dia vondron-nosy, monina sy tsy misy mponina, an'arivony. Mahazo mpitsidika 7 tapitrisa sy sasany isan-taona ary ny ankamaroan'izy ireo dia mandeha mankamin'ny Bali, nosy tsara tarehy misy torapasika fasika fotsy, trano fandraisam-bahiny lafo vidy, toeram-ponenana mora vidy kokoa ary tempolin'i Hindu
Manaraka azy izy ireo Jakarta sy ny gadona reniny, Borneo miaraka amin'ny ala sy ny biby ao aminy ary, Nosy Gilli toy ny toeran-drano antsitrika sy snorkeling. Ireo no tena tian'izy ireo.
Kolontsaina sy tantara ambongadiny, India izany. Ny tanàna telo be mpitsidika indrindra any India dia i Mumbai, Delhi ary Kolkata (Kalkuta, Bombai ary Delhi). Tsy misy te-tsy hahita an'ity Taj Mahal, any Angra, ny fivavahana amin'ny Varanasi, the Ganges ary ny Goas na torapasika Kerala.
Toa tsy ny tsara indrindra ho an'ny mpandeha no hitako, ny namako dia efa niaina zava-dratsy, fa ho an'ny maro dia ny dia amin'ny fiainany izany.
Io no toerana tiako indrindra any Azia fa tsy izy no malaza indrindra raha ny fahitana ny fizahan-tany. Tokyo dia tanàna mahafinaritra ary ny toetran'ny tendrombohitra any amin'ny firenena dia manafina ny endrika tsy hay hadinoina.
Tempoly taloha, trano mimanda tamin'ny vanim-potoana meday, tantaran'i samurai, labiera tsara eo an-toerana, geisy, tendrombohitra Fuji ary ireo valan-javaboary, ny fahalalahan-tanan'ny olony, ny haavo teknolojia, ho ahy dia tsara ny zava-drehetra.
Angamba tsy ny toerana tianao indrindra satria lavitra izany, amin'ny fiaramanidina ihany no ahafahanao mankany ary tsy manan-tsafidy afa-tsy ny mifantoka amin'ny firenena ianao satria vitsy ny mahatratra toerana hafa amin'ny dia iray ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Ny firenena be mpitsidika indrindra any Azia
Traikefa telo tsy azonao adinoina ao Sydney